मोडलिङमा मर्म अनुसार जीवन्त अभिनय गर्नेहरुकाे अझै खाँचाे छ : राज के.सी/माेडल-Nagarikaawaj.com
नागरिक आवाज/बुटवल बैसाख-
मोडलिङ क्षेत्रमा चर्चित नाम हो राजे के.सी. । पछिल्लो समयमा जल्दोबल्दो र विश्वव्यापी रुपमा महत्वपूर्ण रहेको ‘मार्केटिङ’ विषयमा स्नाकोत्तर गरेका उनी मोडलिङमा सफल छन् । १९औं पटक रत्तदान गरेका राज विभिन्न सामाजिक संस्थामा सक्रिय हुँदै उनी नेतृत्वमा पनि रहेका छन् । दुर्लभ रक्त समूह ‘बी नेगटिभ’ भएका राज जीवनमा निकै पोजिटिभ सोँच भएका युवा हुन् ।
तीन दशक पार गरेका मोडल राज के.सी.ले तीन दर्जन जती म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन् उनले हालसम्म आधुनिक र लोकगीतमा अभिनय गरेका छन् भने विभिन्न चलचित्रमा समेत नायकको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । करिब एक दशकको यात्रामा उनले मोडलिङमा सफल मात्र भएनन् चर्चित पनि बने पछिल्लो समयमा पुर्वेली भाकामा रहेको ‘गैरी लसुन…’गीतमा अभिनय गरेका उनले यसै क्षेत्रमा निरन्तरता दिने बताए ।
छोटो समयमा निरन्तर र धेरै म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेका राज के.सी. (विष्णु) सँग नागरिक आवाजले गरेको कुराकानीकाे सारसंक्षेप । सं‍
तपाईको अनुभवमा मोडलिङ के हो ?
–गीतको शब्द र भाव अनुसार आफूलाई ढालेर वास्तविकताको महसुश गराउन सक्नु अभिनय वा कलालाई मोडलिङ भनिन्छ । जहाँसम्म मेरो अनुभव छ, जुन गीतको भाव बुझिन्छ त्यसमा मात्र अभिनय गर्ने गरेको छु ।
अर्कोतर्फ मोडलिङ रुचि र पेशा पनि हो । जसमा लगनशिल भएर व्यसायिक रुपमा गर्न सकियो भने कलाकारितासँगै जिविकोपार्जन गर्ने आधार पनि बन्न सक्छ ।
तर, मोडलिङ भन्दा बित्तिकै शारिरिक रुपमा आकर्षक भएकाहरुले अभिनय गर्ने भन्ने छ भने अर्कोतर्फ यसबाहेक देखिने रहरले मात्र अझ भनौ आँफै लगानी गर्नेहरुको वर्चश्व छ नि ?
–यो यथार्थ हो । केही गायकले गीत तयार गर्दछन् । उनीहरुसँग म्यूजिक भिडियो निर्माणका लागि लगानी नहुँदा उनीहरुले लगानीकर्तालाई नै प्राथमिकता दिन्छन् ।
मोडलिङमा कस्तो व्यत्तित्व भन्ने कुरा गीत र उक्त गीतले दिन खोजेको सन्देशमा भर पर्दछ । आकर्षक हाउ–भाउ भन्दा पनि मर्म अनुसार जिवन्त अभिनय गर्ने मोडलको महत्व हुन्छ । कतिपय रहरले आफै लगानी गरेर मोडल बन्न आउँछन् र रहर पूरा गर्छन् । तर, उनीहरु मोडल बन्दैनन् ।
नेपाली समाजमा मेरो छोरा मोडल बनोस् भन्ने अभिभावक पाइँदैनन् । अन्य पेशा जस्तै यो पेशामा सामाजिक रुपमा आकर्षण किन नबढेको होला ?
–मुख्यतयाः यो क्षेत्र पूर्ण व्यवसायिक बन्न नसक्नु हो । अर्कोतर्फ कला र कलाकारितालाई अन्य मुलुकमा जस्तो व्यवसायिक रुपमा नलिनु हो । रहर र मनोरञ्जनको माध्यम मात्र सोँच्नाले यस्तो भएको हो । तर, विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली अभिभावकले मेरो छोरा–छोरी खेलाडी बनोस् , गायक बनोस् ,नृत्यकार बनोस् भन्न थाल्नु भएको छ । अब मोडल बनोस् भन्ने दिन पनि आउँछ ।
तपाईको व्यत्तिगत अवस्था र सफलताका अनुसार कत्तिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ र , यसबाहेक अन्य कुन पेशा तथा व्यवसायमा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
– मैले कहिल्यै यो पेशालाई रहर र विकल्प मात्र मानिन । अर्कोतर्फ म यसैमा पूर्ण समय दिने र भरपर्ने पनि गरिन । यसो भनिरहँदा मैले यस पेशालाई फुर्सदको पेशा पनि बनाइन । पेशा जुनसुकै होस् । लगन , इमान्दारिता र निरन्तरता हुनु पर्दछ ।
मैले ति गर्दै आएको छु । जसले गर्दा म अन्य काम वा पेशामा पनि सहभातिा जनाएको छु । मैले यस पेशाबाट धेरै सिके । अर्को कुरा मोडल स्क्रिनमा मात्र होइन । वास्तविक जीवनमा पनि रोल मोडल हुनुपर्छ भन्ने लागेर म सामाजिक क्षेत्रमा पनि कार्यरत छु ।
प्रसङ्ग ल्याउनुभयो । यस विषयमा पनि कुरा गरौं । सामाजिक क्षेत्रमा पनि चलेको नाम हो ‘ राज के.सी.’ कुन–कन र कस्ता –कस्ता संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
–म लायन्स क्लब बुटवल सिटीको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । विभिन्न संघसंस्थाहरुमा सहयोग तथा अन्य कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । नियमित रक्तदाता समाजको आजिवन सदस्य छु । लगाएत आधा दर्जन संघसंस्थामा प्रतक्ष्य एवम् सक्रिय रुपमा आवद्ध छु ।
भविष्य नदेख्ने तर, यो क्षेत्रमा आउन चाहाने युवाहरुको लहर छ । उनीहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
–भविष्य एउटा कल्पना र विश्वास हो । तर, यथार्थ पछि नै थाहा पाइन्छ । तर, त्यो भविष्यको कल्पनासँगै निर्माण गर्न चाहानेले आँफै लगानी गररे भन्दा पनि पेशा र अभिनय बारे बुझेर र सिकेर आत्माविश्वास र संघर्षका साथ निरन्तर लाग्नु पर्दछ ।
–कलाकारितालाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय योगदान पु¥याउने योजनाछ । साथै जुनसुकै पेशा वा संस्थामा रहेपनि प्राप्त सफलतालाई दिगो राख्न आवश्यक हुन्छ ।
मेरो पहिलो प्राथमिकता अभिनय र सामाजिक क्षेत्रमा जति गरेको छु त्यसलाई संस्थागत गर्ने रहेको छ । र , आगामी दिनमा थप योगदान र प्राप्ती नै मेरो लक्ष्य हो ।